In ka badan 240 qof oo hal maalin qura u dhintay cudurka Corovavirus | HalQaran.com
Home Caalamka In ka badan 240 qof oo hal maalin qura u dhintay cudurka...
In ka badan 240 qof oo hal maalin qura u dhintay cudurka Corovavirus
China (Halqaran.com) – Dad gaaraya 242 qof ayaa maalin kahor ugu dhintay cudurka Corona gobolka Hubei ee dalka Shiinaha, taas oo ka dhigan tiradii ugu badneyd oo maalin qura cudurka Corona ugu dhimatay dalkaas.
Sidoo kale waxaa sare u kacay tirada dadka uu haleelay xanuunka, waxaana lagu soo warramayaa in la daweeyay ku dhawaad 15 kun oo qof. Gobolkan ayaa bilaabay qaab cusub oo lagu la tacaalayo xanuunka, taas oo bannaanka soo dhigtay kiisas badan oo haatan la ogaaday.
Dhanka kale, Markab ay saaran yihiin laba kun oo qof ayaa gaaray dalka Cambodia, kadib markii laga soo eryay shan dal, kuwaas oo sheegay inay ka cabsi qabaan in dadka saaran ay qabaan xanuunka Corona.
In ka badan 240 qof oo hal maalin qura u dhintay Xanuunka Corovavirus